Ikheli le-IP lomuntu siqu 192.168.8.2 inikezwe umshini ngaphakathi kwenethiwekhi ehlanganisiwe futhi ayitholakali ngokushesha ukuzingelwa enetheni. Ukwenza amandla ukunikezwa kwamakheli we-IP ngaphakathi kwezinhlangano namanethiwekhi, amakheli agodliwe asungulwa. Akunakuzikhandla ukuthola ikheli lomuntu siqu le-IP ngokuchaza isithombe sangempela.
I-IP 192.168.8.2 iyi-IP ethile egcinwa isebenzisa i-admin console yama-routers. Lawa ma-IPs angeziwe afana ne-192.168.123.1, 192.168.77.1, 192.168.8.1, njll. Ngokuphelele abonwa ezingeni lomhlaba lama-IPs womzila. Futhi ibizwa ngokuthi "IP Default Gateway".
Ikheli le-IP https://192.168.8.2 irekhodwe nge-Inthanethi Eyabelwe Izinombolo Authority IANA njengengxenye yamanethiwekhi agciniwe ka-192.168.8.0/24. Esikhaleni somuntu siqu ikheli le-IP alinikwanga kunoma yiliphi iqembu futhi wonke umuntu angasebenzisa ikheli le-IP ngaphandle kwesivumelwano serejista yendawo ye-Intanethi njengoba kuchaziwe ngo-1918 RFC, ehlukile kukheli le-IP lomphakathi.
Ukufinyelela ku-Admin Page 192.168.8.2
Mane nje ufake 192.168.8.2 ebhokisini lekheli lesiphequluli sewebhu. Ungahle usebenzise ikhasi lomlawuli futhi uqinisekise nokungena ngemvume kwe-Passkey. Ngokushaya isixhumanisi se-192.168.8.2 ungathola futhi i-logon kuso.
Ngaphezu kwalokho uzothola yonke imiphumela yokubheka yekheli le-IP eliyimfihlo 192.168.8.2. Uma ufuna ukuthola ukungena ngemvume kwama-routers angenantambo, ipulagi yokungena, noma imodemu ungayisebenzisa ngokushaya nje kusixhumanisi. Kwi-TP Link, D-Link, noma i-router engenantambo yeNetgear amagama abasebenzisi abasebenziseka ngokuzenzakalela noma ama-password 'setup' noma 'admin', ungahle uphinde ufune ukusethwa okuzenzakalelayo ngemuva komshini. Uma lokhu kungasebenzi, ungakhetha kahle ukusetha kabusha ama-routers. Ukuze wenze lokhu kufanele ucindezele futhi ubambe inkinobho yokusetha kabusha cishe imizuzwana engama-20. Ngemuva kwalokho ukusungula kabusha izilungiselelo zasembonini futhi ikuvumela ukuthi ungene ngemvume ngemininingwane ebonwe kusitika.
Ikheli le-IP 192.168.8.2 liqoshwe ne-Internet Allocated Number Authority IANA njengokuhlukaniswa kwenethiwekhi yangasese 192.168.8.0. Esikhaleni sangasese ikheli le-IP alinikwanga umphakathi owodwa ovinjelwe, ngaphezu kwe-ISP, futhi wonke umuntu angasebenzisa leli kheli le-IP ngaphandle kokuvumelana kwerejista ye-Intanethi yesifunda.
Noma kunjalo, amaphakethe we-IP abanjwe ebangeni langasese awakwazi ukudluliselwa nge-Intanethi yomphakathi, ngakho-ke uma inethiwekhi yangasese enjalo ifisa ukujoyina i-Intanethi, idinga ukutholakala ngesiguquli sekheli lenethiwekhi (esibizwa nangokuthi yi-NAT) isango, noma iseva elibamba.
Isango lomfanekiso le-NAT kungaba yirutha engenantambo noma exhunyiwe oyithola kumthengisi we-broadband. Ikheli le-IP elihleliwe laleli thuluzi kububanzi benethiwekhi kusuka ku-192.168.8.0/24 lingahle lincike kakhulu ku-192.168.8.254 noma ku-192.168.8.1. Isixhumi esibonakalayo sewebhu esangweni kufanele sitholakale nge-Hypertext Transfer Protocols HTTP enye i-Hypertext Transfer Protocol Protocol Secure HTTPS protocol. Ukuzama lokhu udinga ukungena ebhokisini lekheli elithi 'http: // ip address' noma 'https: // ip address' lesiphequluli sakho sewebhu esikhethiwe ngokufana ne-Google Chrome noma ukungena ngemvume kwe-Mozilla Firefox ngegama lomsebenzisi nama-PW ahlongozwe ngumhlinzeki wakho .